Al-Shabaab oo madafiic ku garaacay saldhiga ciidamada dalka Kenya – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaAl-Shabaab oo madafiic ku garaacay saldhiga ciidamada dalka Kenya
Hiiraan Xog, Feb 14, 2018:- Al-Shabaab ayaa xalay Madaafiic ku garaacay degaanka Ceel-raam oo ku yaalla gobolka Waqooyi Bari ee dalka kenya.
Saraakiil ka tirsan ciidamada Xoogga dalka Kenya ayaa Warbaahinta u xaqiiijiyay in ay jirto Madaafiicda lagu garaacay degaanka, waxaana ay ka gaabsadeen in ay Faahfaahin ka bixiyaan Khasaaraha ka dhashay.
Saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay in ay iska caabiyeen Weerarkaasi, islamarkaana ay horay u ahaayeen xogta in Al-Shabaab ay kusoo qaadi rabaan Weerar.
Qaar ka mid ah dadka degaanka ayaa xaqiijiyay in ay maqlaayeen daryanka Madaafiicda iyo sidoo kale ciidamada Kenya oo Jawaab ka bixinaayay.
Ilaa iyo hadda lama ogga khasaaraha ka dhashay Weerarkaasi, waxaana saraakiisha ciidamada Kenya ay sheegayaan in ay waddaan baaritaano.